Ihe a ga-eme ndị chọrọ ime ka ndị Izrel fee chi ọzọ (1-18)
13 “Ọ bụrụ na e nwee onye amụma n’obodo unu ma ọ bụ onye na-ekwu ihe ga-eme n’ọdịnihu n’ihi ihe ọ rọrọ ná nrọ, ya agwa unu na e nwere ihe àmà ma ọ bụ ihe ịtụnanya ga-eme n’ọdịnihu, 2 ihe àmà ahụ ma ọ bụ ihe ịtụnanya ahụ ọ gwara unu emechaa mee, ya asị unu, ‘Ka anyị soro chi ọzọ, chi ndị unu na-amaghị, ka anyị feekwa ha ofufe,’ 3 unu egela ntị n’ihe onye amụma ahụ ma ọ bụ ọrọ nrọ ahụ kwuru+ n’ihi na Jehova bụ́ Chineke unu chọrọ ịnwale unu+ ka ọ mara ma ùnu ji obi unu niile na mkpụrụ obi* unu niile hụ Jehova bụ́ Chineke unu n’anya.+ 4 Ọ bụ Jehova bụ́ Chineke unu ka unu ga-eso. Ọ bụ ya ka unu ga-atụ egwu. Unu ga-edebe ihe o nyere n’iwu, geekwa ntị n’olu ya. Ọ bụ ya ka unu ga-efe,* unu ahapụkwala ya.*+ 5 Ma, a ga-egbu onye amụma ahụ ma ọ bụ ọrọ nrọ ahụ+ n’ihi na ọ gbara unu ume ka unu nupụrụ Jehova bụ́ Chineke unu isi, bụ́ onye kpọpụtara unu n’Ijipt ma napụta unu n’ebe unu nọ na-agba ohu.* Ọ chọrọ ime ka unu hapụ ihe Jehova bụ́ Chineke unu nyere unu iwu ka unu na-eme. Unu ga-ewepụkwa ihe ọjọọ n’obodo unu.+ 6 “Ọ bụrụ na nwanne gị nwoke, nwa nwoke nne gị mụrụ, ma ọ bụ nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwaanyị ma ọ bụ nwunye gị ị hụrụ n’anya ma ọ bụ ezigbote enyi gị anwaa ịrafu gị na nzuzo, sị, ‘Ka anyị gaa fee chi ọzọ,’+ chi ndị gịnwa ma ọ bụ nna nna gị hà na-amaghị 7 n’ime chi dị iche iche ndị niile gbara unu gburugburu na-efe, ma ọ̀ bụ nke ndị bi unu nso ma ọ̀ bụ nke ndị bi unu n’ebe dị anya, malite n’otu nsọtụ ala ahụ ruo na nsọtụ ya nke ọzọ, 8 ekwetala ihe o kwuru. Egela ya ntị.+ Emerela ya ebere ma ọ bụ nweere ya ọmịiko, echebekwala ya. 9 Kama, unu ga-egburịrị ya.+ Ọ bụ gị ga-ebu ụzọ tụọ ya nkume, ndị Izrel niile esorozie gị tụọ ya nkume.+ 10 Jirinụ nkume tụgbuo ya+ n’ihi na ọ chọrọ ime ka unu hapụ Jehova bụ́ Chineke unu, onye kpọpụtara unu n’Ijipt, n’ebe unu nọ na-agba ohu.* 11 Izrel niile ga-anụ ya wee tụọ egwu. Ha agaghịkwa eme ụdị ihe ọjọọ a ọzọ n’obodo unu.+ 12 “Ọ bụrụ na unu anụ ka a na-ekwu n’otu n’ime obodo ndị Jehova bụ́ Chineke unu na-enye unu ka unu biri, sị, 13 ‘E nwere ụmụ nwoke ndị na-abaghị uru bụ́ ndị pụtara ka ha duhie ndị bi n’obodo ha. Ha na-asị: “Ka anyị gaa fee chi ọzọ,” chi ndị unu na-amaghị,’ 14 unu ga-eleba okwu ahụ anya, sie imi n’ala, jụọkwa ase nke ọma.+ Ọ bụrụ na o doro anya n’eziokwu na e mere arụ a n’obodo unu, 15 unu ga-ejirịrị mma agha gbuo ndị bi n’obodo ahụ.+ Jirinụ mma agha bibie obodo ahụ na ihe niile nọ na ya, ma anụ ụlọ ha.+ 16 Unu ga-akwakọta ihe niile dị n’obodo ahụ n’etiti ámá obodo ahụ. Unu ga-agba obodo ahụ na ihe niile ahụ a kwakọtara ọkụ ka ọ bụrụ àjà a na-esuru Jehova bụ́ Chineke unu ọkụ. Obodo ahụ ga-abụzi ebe e bibiri ebibi ruo mgbe ebighị ebi. E nweghị mgbe a ga-arụghachi ya. 17 Unu ekwesịghị iwere ihe ọ bụla a ga-ebibi ebibi,+ ka Jehova wee kwụsị nnukwu iwe ọ na-ewe ma meere unu ebere, nweere unu ọmịiko, meekwa ka unu mụbaa, otú ọ ṅụụrụ nna nna unu hà n’iyi.+ 18 N’ihi na unu kwesịrị ịna-erubere* Jehova bụ́ Chineke unu isi. Otú unu ga-esi eme ya bụ idebe iwu ya niile m na-enye unu taa, si otú ahụ na-eme ihe dị mma n’anya Jehova bụ́ Chineke unu.+
^ Ma ọ bụ “ga-ejere ozi.”
^ Na Hibru, “ga-arapara ya n’ahụ́.”
^ Ma ọ bụ “ịna-ege ntị n’olu.”